सुस्तायो पिसिआर परीक्षण – Health Post Nepal
सुस्तायो पिसिआर परीक्षण
२०७७ वैशाख १८ गते १७:११
अस्ट्रेलियामा एकजना नेपालीलाई कोरोना संक्रमण
संक्रमितको घुमफिरले झापाको गाउँ नै सिलबन्दी
समुदाय स्तरमै कोरोना संक्रमण पुष्टि भइसकेपछि पनि सरकारले अझै परीक्षणको गति बढाउन सकेको छैन। बरू पिसिआर परीक्षणको दर अझै घट्दै गएको देखिन्छ।
दैनिक झन्डै ६/७ सय सम्म हुने पिसिआर परीक्षण अहिले भने दैनिक ३ सय हाराहारी छ।
देशभरका १६ स्थानबाट सरकारले नमुना परीक्षण गरिरहेको छ। तर, निकै थोरै।
‘पिसिआर परीक्षणमा भइरहेको यो आलटालका कारण ठूलै क्षति बेहोर्नुपर्ने हुनसक्छ’ इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व निर्देशक डा. बाबुराम मरासिनी भन्छन्।
दैनिक ३ सयको हाराहारीमा परीक्षणले मात्र कोरोना स्थिति थाहा नहुने विज्ञहरुको भनाई छ।
‘पिसीआर परीक्षण गर्नेतिर सरकारको ध्यानै देखिएको छैन’, डा. मरासिनीले भने, ‘पिसिआर नुमना परीक्षण नबढाउने हो भने आगामी दिन व्यापक रुपमा संक्रमण फैलिने खतरा रहन्छ।’
उनका अनुसार हरेक जिल्लामा ४–५ ठाउँमा केन्द्र बनाएर परीक्षणको गर्न थाल्नुपर्छ।
‘कोरोना संक्रमण तेस्रो चरणमा गइसकेको संकेत गरेको छ, डा. मरासिनी भन्छन्, ‘विदेशबाट आएको मात्र होइन कि ज्वरो तथा खोकी लागेका सबैको स्वाब लिनुपर्छ।’
मन्त्रालयले ठोस योजना बनाएर काम गर्न नसकेको डा. मरासिनीको बुझाई छ। ‘कोरोना नियन्त्रणको लागि प्रशासनिक कर्मचारीले अभियान चलाएको जस्तो देखिन्छ,’ डा. मरासिनीले भने, ‘प्राविधक तथा चिकित्सकलाई नियन्त्रणको पाटोमा अघि सार्नुपर्छ।’
उनका अनुसार मन्त्रालयसँग कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुनै रणनीति नै छैन।
सरकारले बैशाख २५सम्म लकडाउन थप गर्‍यो। तर, यो बीचमा के गर्ने? भन्ने कुनै योजनै भएन। न त्यसका लागि मन्त्रालयले आफैं नै केही योजनाहरु बनायो।
‘अब पनि सबै ठाउँलाई रेडजोनमै राख्ने हो?’ मरासिनीको प्रश्न छ ‘खै त हाम्रो रणनीति अब कसरी काम गर्ने भन्ने योजना खोई?’
उनका अनुसार ठूला जिल्लामा दैनिक १५ सय र स–साना जिल्लामा ४–५ सयको हाराहारीमा परीक्षण गर्न जरुरी छ।
‘४५ हजारको हाराहारीमा पिसिआर परीक्षण गरेको भए अहिलेको स्थिति धेरै नै स्पष्ट हुने थियो,’ डा. मरासिनीले भने, ‘तर, सरकारले आलटाल गरिरहेको छ।’
चिकित्सक तथा ल्याबका प्राविधिकहरुलाई हेरक जिल्लाबाट नमुना परीक्षण गर्न खटाउनुपर्ने डा. मरासिनीको सुझाव छ।
राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले मात्र दैनिक ८ सयको हाराहारीमा नुमना परीक्षणको क्षमता राख्छ।
हालसम्म पिसीआरबाट ११ हजार ५ सय २४ नमुना परीक्षण भएको छ। तिमध्ये ५७ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ।
मन्त्रालय भन्छ: स्वाब संलकन नभएको कारण परीक्षण कम भयो
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय भने अनुसार केही दिनदेखि नुमना संकलन नभएको कारणले पनि परीक्षणमा कमी आएको बताउँछ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले हेल्थपोष्टसँग कुराकानी गर्दै भने, ‘पहिला–पहिला हामीले ८–९ सयसम्म पुर्याएका थियौँ, यो हिसाबमा अहिले परीक्षण कम नै भएको हो’, डा. देवकोटाले भने, ‘यसको मतलव दायारा घटाएको भने होइन।’
परीक्षण गर्ने किटको मौज्दात कमी भएकाले परीक्षणमा कमी आएको उनले बताए। भर्खरै २० हजारको हाराहारीमा परीक्षण कीट आएको र अबको दिनमा परीक्षणको संख्या बढ्ने डा. देवकोटाले दाबी गरे।
सरकारी क्षेत्रबाट यी ठाउँमा हुन्छन् परीक्षण
सरकारी क्षेत्रमा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकु, वीर अस्पताल, पाटन अस्पतालमा कोरोनाको परीक्षण हुँदै आएको छ।
त्यस्तै जनकपुर प्रादेशिक अस्पताल, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल, सेती प्रादेशिक अस्पताल, कीटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र हेटौँडा, धुलिखेल अस्पतालमा परीक्षण हुँदै आएको छ।
त्यसैगरी, राष्ट्रिय गहुँबाली अनुसन्धान केन्द्र भैरहवा, विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान, कोशी अस्पताल विराटनगर र भरतपुर डायनोष्टिक प्रयोगशाला, भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा परीक्षण भइरहेको छ।
परीक्षणका लागि निजीलाई पनि खुला
योसँगै सरकारले मापदण्ड पूरा भएका निजी प्रयोगशालाहरुलाई पनि कोरोना परीक्षणको लागि प्रक्रिया खुला गरेको छ।
त्यसका लागि मन्त्रालयबाट छुट्टै स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ। ‘आवेदन दिएपछि मन्त्रालयबाट अनुगमन समितिले अनुगमन गर्छ,’ डा. देवकोटाले भने,‘मापदण्डको आधारमा मात्र मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर परीक्षण गर्न पाइनेछ।’
अहिले उपत्यकामा मात्र निजी क्षेत्रका २० भन्दा बढी अस्पताल र प्रयोगशालासँग पिसीआरबाट नमुना परीक्षण गर्ने क्षमता रहेको निजी अस्पताल तथा प्रयोगशालाको दाबी छ।